370 Dragon Dredge Nanomboka ny asa teo amin'ny Tetikasa ondana -Ellicott Dredges
Bopa, Bénin: Logistika sy fanampiana SA, mpiantoka ny fanondranana avy any Cotonou, Benin, dia nomena fifanekena iray nomen'ny Ministeran'ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana maharitra mba hanaraha-maso ny tondra-drano amin'ny fizaran-taona any amin'ny faritra.
Saika ny ampahatelon'ny mponina any Afrika Andrefana no mipetraka ao amin'ireo vondron'olona izay tratran'ny fiantraikany ratsy amin'ny fampandrosoana ny morontsiraka sy ny fiovan'ny toetr'andro any amin'ny faritra izay misongadina ny fipoahan'ny tanàna sy ny tondra-drano. Tamin'ny taona 2018, olona maherin'ny 100,000 no tsy manan-kialofana, ary olona 43 no maty vokatr'izany tondra-drano be ao Cotonou, Benin.
Tamin'ny volana novambra 2019, dia ny henihezana iray any ivelan'i Bopa, Benin dia tondraka imbetsaka noho ny orana mivatravatra. Nandrahona ny fandravana trano ny fokonolona teo an-toerana. Crews dia hampiasa an Dragon Ellicott 370® Dredge hanesorana ny taimbo 150,000 metatra toradroa avy ao an-trano sy mampiasa ny fitaovana maloto mba hamolavola vola mba hiarovana ny trano mba tsy hahalasa azy ireo.
Ity tetikasa fikojakojana ny morontsiraka ity dia vatsian'ny Banky Iraisam-pirenena amin'ny alàlan'ny programa WACA Resilience Investment Program ary mikendry ny hanamafy orina ny fiaraha-monina any amin'ireo vondron'olona toa an'i Bopa. Ny WACA Resilience Investment Program dia manohana ny ezaka ataon'ny firenena hanatsarana ny fitantanana ny fizarana tolo-batana mitovy aminy ary hampihena ny loza voajanahary sy nataon'olombelona izay misy fiantraikany amin'ireo vondron-tany amorontsiraka any amin'ny firenena Afrikanina Andrefana toa an'i Benin, Togo, Senegal, Sao Tome, Mauritania, ary Principe.